Sarifka lacagaha qalaad ee sarifka calamiga ah - Xeeladaha wax lagaga gato waqtiyada yar yar | vfxAlert official blog
Timeframe M5: samaynta lacag on oscillators
Xeeladaha qallafsan ee wakhtiga daqidadu waa kuwo caan ah. Laakiin, waxaad si dhakhso ah u heli kartaa faa'iido iyo khasaaro labadaba. Aynu kordhino faa'iidada anagoo adeegsanayna waqtiga M5 (5 daqiiqo) iyo sooftiweerka calaamadaha binary auto software ee adeega vfxAlert .
Astaamaha istaraatiijiyadda laba-geesoodka ah:
Nooca : Trend
Waqtiga : M5.
Hantida ganacsiga : Lammaane kasta oo lacag ah. Shuruudda ugu weyni waa fidsan go'an (2-3 dhibcood) oo aan lahayn kharashyo qarsoon.
Waqtiga ganacsiga : Dhammaan fadhiyada ganacsiga sarifka calamiga ah.
Wakhtiga dhicitaanka lagu taliyay : 5-10 min.
Istaraatiijiyadu waxay isticmaashaa isku-dar heersare ah oo ka kooban laba oscillators Stochastic oo si xad dhaaf ah loo iibsaday oo leh muddooyin kala duwan. Oscillator-ka 'Stochastic oscillator' ayaa qiimeyn doona dheelitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: saadaaliyayaha ka sarreeya heerka 80 - dhamaadka kor u kaca (la iibsaday), ka hooseeya 20 - dhamaadka hoos u (la iibin):
"Slow" Stochastic leh xilliga 14 . Wuxuu go'aamiyaa isbeddelka xilliga dhexe ee muddada shaqada. Waxay noqon doontaa calaamadda ugu horreysa ee bilawga dib u noqoshada ama sii wadida dhaqdhaqaaqa qiimaha.
"Fast" Stochastic leh xilliga 9 . Wuxuu xaqiijiyaa xawliga jihada uu u socdo 3 ama 5 shumac ee soo socda. Waxaad furi kartaa ikhtiyaar ka dib markaad xaqiijiso calaamadaha ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee adeega vfxAlert.